ချန်ဘာလိန် အစစ်အမှန်ကို မြင်တွေ့ခွင့် ရတော့မှာလား ? - xyznews.co
ချန်ဘာလိန် အစစ်အမှန်ကို မြင်တွေ့ခွင့် ရတော့မှာလား ?
ချန်ဘာလိန် ဟာ ပရီးမီးယာကစားခွင့်မရတာ3နှစ် ခွဲ ကျော်တော် ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲချိန်ပြည့် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့ရတဲ့ ပွဲဟာ 2018 ခုနှစ် ဧပြီလ အတွင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ ဘုန်းမောက် နဲ့ ပွဲစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီပွဲဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမားဘ၀ ကို နှိပ်စက်မယ့် ဒဏ်ရာဆိုးကြီး မရခင် 10 ရက် အလိုမှာ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုမား နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အကြို ဗိုလ်လုပွဲစဉ်မှာ သူဟာ ACL ဒဏ်ရာ တစ်ခုတည်းပဲ ရခဲ့တာ မဟုတ်ပဲ အတွင်းပိုင်း အရွတ်ကြော တစ်ခု နဲ့ ဘေးတိုက် တံကောက်ကြောတွေပါ ဖြတ်ထွက်သွားခဲ့တာပါ။
ဘောလုံး သမားတစ်ယောက် အတွက် ဒီထက် ပိုပြီး ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ ဒဏ်ရာမျိုးတော့ ထပ်ပြီး ကြုံနိုင်စရာ အကြောင်းကို မရှိတော့ပါဘူး။ အဲဒီ နှစ် ဘောလုံးရာသီက သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ကောင်းခဲ့လွန်းလို့ ၊ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲ အပြီး ကိယက်ဖ် က ကွင်းဘေးမှာ ချိုင်းထောက်ကြီးနဲ့ ငိုနေတဲ့ သူ့ကို မြင်ရင်း ပရိသတ်တွေ အားလုံး ဂရုဏာတွေ သက်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။
နည်းပြကြီး ကလော့ပ် ဆိုရင် “ ထောင်ကျနေတဲ့ ခင်ပွန်းသည် ကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ ဇနီးသည်လို ချန်ဘာလိန် ပြန်လာမယ့် နေ့ကိုလဲ မျှော်နေမယ်” ဆိုပြီးတောင် တင်စား ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ ကလပ် အသင်းဘက်ကလဲ ဒဏ်ရာ ပြသနာ ကင်းကင်းရှင်းရှင်း မရှိသေးချိန်မှာတော့4နှစ် စာချုပ် သက်တမ်းတိုးကာ ချုပ်ဆိုပေးရင်း ၊ ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိတဲ့ အကြောင်း ပြသခဲ့ ပါတယ်။
2019-2020 ဘောလုံးရာသီမှာ သူဟာ ပြိုင်ပွဲပေါင်းစုံ 8 ဂိုး အထိ သွင်းပြရင်း ၊ နောက်တစ်ကြိမ် စွမ်းဆောင်ရည်တွေ နဲ့ ပြန်လာနိုင်တော့မယ့် အလားအလာကောင်း တချို့ ပြသနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သို့သော် နောက်ထပ် ဒဏ်ရာပြသနာတွေ က ဆက်တိုက် နှိပ်စက်ခဲ့သလို ၊ 2020-2021 ဘောလုံးရာသီမှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားခွင့် 244 မီးနစ် နဲ့သာ ကျေနပ်ခဲ့ရတာပါ။
အဲဒီ အထဲမှာ ပွဲထွက် ကစားသမား စာရင်း မှာ ပါဝင်ခွင့် ရခဲ့တာ က2ပွဲသာ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကလော့ပ်ဟာ ဒီကြားထဲမှာ ချန်ဘာလိန် ကို ကွင်းလယ် ကစားသမား နေရာရော ၊ တောင်ပံ ကစားသမား နေရာတွေ အပြင် နောက်ချန် တိုက်စစ်မှုး အဖြစ်ပါ စမ်းသုံးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူ့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ထူးခြား မလာခဲ့ပါဘူး။
သို့သော် ဒီနှစ် ဘောလုံးရာသီ မှာတော့ ကံတရားရဲ့ အလှည့်အပြောင်းတွေ က ချန်ဘာလိန် ကို မျက်နှသာ ပေးဖို့ ဖန်တီး လာခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူး ဟာ ကွင်းလယ် ကစားသမားတွေ ဒဏ်ရာပြသနာ နဲ့ ဆက်တိုက် ရုန်းကန်ခဲ့ရတာမို့ ၊ ချန်ဘာလိန် အတွက် ကစားခွင့်တွေက အလိုအလျှောက်ကို ဖန်တီးပေးနေသလိုပါပဲ။
ဒါတောင် တချို့ပွဲတွေ မှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် တချို့ ပွဲတွေမှာတော့ အားရစရာ မရှိသေးပါဘူး။ နည်းပြကြီး ကလော့ပ် ကတော့ ချန်ဘာလိန် ရဲ့ အဓိက ပြသနာ က သူကိုယ်တိုင် ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းကို အေတီကို နဲ့ ပွဲအပြီးမှာ အခုလို မှတ်ချက် ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ သူ့အတွက် ပြသနာ က အချိန်တွေ အကြာကြီး ကစားခွင့် မရတဲ့ အချက်ကို ခေါင်းထဲမှာ စွဲနေတာပါ။ ဒါကြောင့် သူ့အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပြန်ပြီး သက်သေပြရမယ်လို့ ခံယူထားလွန်းပါတယ်။
ချန်ဘာလိန်မှာလဲ ချန်ဘာလိန် ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ရှိပြီးသားလေ။ ကျနော်တို့ လိုချင်တာ က ပိုပြီး ရင့်ကျက်မှု ရှိရှိ နဲ့ ကစားပြမယ့် ချန်ဘာလိန် မျိုးပါ။ တည်တည်ငြိမ် နဲ့ ကြိုးစားပြမယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပါ။ အခုတော့ သူက အချိန်တွေ အကြာကြီး မကစားရပဲ ဖြစ်နေတာ ကို တစ်ပွဲထဲနဲ့ သက်သေပြလိုက်မယ် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်” လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒီတစ်ပတ် မှာ ကစားခဲ့တဲ့ အသင်းဟောင်း အာဆင်နယ် နဲ့ ပွဲမှာတော့ ချန်ဘာလိန် ရဲ့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် တချို့ ကို စတင် မြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။ ကွင်းလယ်မှာ ဖာဘင်ဟို နဲ့ တီယာဂို တို့က ခံစစ် ကို ပူးတွဲ တာဝန်ယူထားချိန် ၊ သူက Free Role ကစားရင်း လိုအပ်တဲ့ နေရာတိုင်း ကို လိုက်လံ ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါတယ်။
တိုက်စစ်အတွက် မို ဆာလာ နဲ့ တွဲပေးသလို ၊ ခံစစ် ကို ဆင်းကူရမယ် ဆိုရင်လဲ 18 ကိုက်ထဲအထိ ဆင်းကာ ကူညီပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
အချက်အလက် ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းတွေကို ကြည့်လိုက်မယ် ဆိုရင် ချန်ဘာလိန် ဟာ Pressing 16 ကြိမ် အထိ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လီဗာပူး ကစားသမားတွေ ထဲမှာ အကြိမ်ရေ အများဆုံး ဖြစ်သလို ၊ ဘောလုံး လုယူတဲ့ အပိုင်းမှာလဲ ကော့စတက် စီမီကတ် (4 ကြိမ်) ပြီးရင် ၊3ကြိမ် နဲ့ ဒုတိယ အများဆုံး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘောလုံး ပေးပိုးမှု ပြီးမြောက်နှုန်း က 76% အထိ ရှိခဲ့တာပါ။
ကလော့ပ် ကတော့ ချန်ဘာလိန် ရဲ့ ခြေစွမ်း ကောင်းမွန်နေသည့်တိုင်အောင် နောက်ထပ် ဒဏ်ရာပြသနာတွေ ရရှိလာမှာ စိုးရိမ်တာကြောင့် ဒုတိယပိုင်းမှာပဲ ဟန်ဒါဆင် နဲ့ လူစားလဲ ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဒီတစ်ကြိမ် ကွင်းထဲကနေ ထွက်ခွာချိန်မှာတော့ အခါတိုင်းနဲ့ လုံး၀ မတူပဲ အန်ဖီးလ် တစ်ကွင်းလုံးက ပရိသတ်တွေက လက်ခုပ်သြဘာတွေ ကို ဆူဆူညံ့ညံ့ နဲ့ အားပေးသွားခဲ့ ပါတယ်။
ချန်ဘာလိန် ရဲ့ အသက် က 28 နှစ် ရှိနေပါပြီ။ ကစားသမား တစ်ယောက် ရဲ့ အမြင့်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်တွေ ပေါ်ထွက်လာမယ့် ကာလမျိုးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ စာချုပ် သက်တမ်းက နောက်ဆုံး 18 လ အတွင်းကို ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်လို့ ၊ သူ့အနေနဲ့ လီဗာပူး မှာပဲ ဆက်ပြီး ကစားချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ အသင်းကြီး တစ်သင်းကို ပြောင်းရွှေ့ ကစားခွင့် ရချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီကာလတွေဟာ သူ့ရဲ့ ဘောလုံးသမား ဘ၀ အရေးကြီးတဲ့ အခိုက်အတန့်မျိုးကို ရောက်ရှိနေပြီ လို့ ဆိုပါရစေ။
ချန်ဘာလိန် အစစ်မှန်ကို ပြန်မြင်နေရပြီလား ဆိုတာ ဆက်ပြီး စောင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါ။
အသင်းဟောင်း လီဗာပူး နဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ် တို့ ကစားကြမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ် ဂိုးရလဒ်ကို ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ စတီဗင်ဂျာရတ်
Previous Article ချဲလ်ဆီးမှ အထုတ်ခံခဲ့ရတာဟာ လမ်းပတ်နဲ့ ၄င်းအတွက် ပြင်းထန်လွန်းခဲ့ကြောင်း ဖွင့်ဟရင်း ၊ တူချယ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝန်ခံမှု တခု လုပ်လာတဲ့ ဂျိုဒီ မောရစ်
Next Article ပရီးမီးယားလိဂ် title race မှာ လီဗာပူး နဲ့ မန်စီးတီး တို့အပေါ် ချဲလ်ဆီးတို့ အသာရနေတဲ့ အချက်ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဂျွန်တယ်ရီ